मनोरंजन – Wow Sansar
ल्म रिफ्युज़ीबाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी चर्चित अभिनेत्री करीना कपुर एक सर्वाधिक चर्चाकि नायिका हुन् । उनले रिफ्युज़ीबाट बेस्ट डेब्यु फिल्मकी नायिकाबाट अवाड जितेकी थिइन् । नयाँ फिल्म र फोटोशुटका कारण चर्चामा आइरहने करिना दोस्रो सन्तानलाई जन्म दिदैछिन् । kareena yoga छोरा तैमुरलाई जन्म दिएको करिब ४ वर्षपछि फेरि परिवारमा नयाँ सदस्य थप गर्न लागेको उनीहरुले औपचारिक जानकारी दिइसकेका छन् । उनको गर्भावस्थाको फोटो र भिडियोहरु भाईरल भइरहेको छ । सोमबार पुन: उनले योगा गरेको तस्विरहरु शेयर गरेकी छिन् । जुन उनका फ्यानहरुले खुबै मन पराइरहेका छन् ।
चर्चामा आउन मानिसहरुले अनेक हर्कत गर्दछन् । ‘मिस्टर पर्फेक्सनिष्ट’का उपनामले समेत चर्चित बलिउड अभिनेता आमिर खानकी छोरी इरा खानले पनि चर्चामा आउनको लागि अनेकन हर्कत गरेकी छिन् । केही समय अगाडी मात्र इराले सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सेयर गर्दै डिप्रेशनको खुलासा गरेकी थिइन् । पछि फेरि आफ्नै बुबाको जिम ट्रेनरसँग प्रेममा रहेको खुलासा गरेको थिइन् । यस्तै फन्डा गर्ने क्रममा इराले जंगलमा केही फोटोसुट गरेकी छिन् । इन्स्टाग्राममा ३ लाख ८१ हजार भन्दा बढी फ्लोअर्स कमाएकी इरालाई चर्चामा आउनकै लागि अनेकन हर्कत गर्ने गरेको प्रतिक्रया आउने गरेको छ । इरा आमिर खान र उनकी जेठी श्रीमती रिना दत्ताकी सन्तान हुन् । आमिर र रीनाले सन् १९८६ मा विवाह गरेका थिए । इराबाहेक दुबैका जुनैद नामका छोरा पनि छन् । सन् २००२ मा आमिर र रिनाको सम्बन्धविच्छेद भयो । सन् २००५ मा आमिरले किरन रावसँग दोस्रो विवा
सम्राट शुक्ला टिकटक स्टार निशा गुरागाई, तपाईले पछिल्ला दिनहरुमा यो नाम धेरै सुन्नु भएको हुनुपर्छ । तर किन निशा गुरागाईंको नाम आजकल यति धेरै चर्चामा रहेको छ भनेर कारण बताउन सम्भवतः मूर्खता हुनेछ किनभने तपाई पहिले नै एकदम अगाडि हुनुहुन्छ । तर यस संसारमा केही निर्दोष मान्छेहरु छन्, म जस्तो, जो म जस्तो पूर्ण निर्दोष छ, त्यसैले उनीहरूलाई निशा गुरागाईंको नाम किन चर्चामा आयो भन्ने थाहा छैन । उनको एक भिडियो आजकल भाइरल भइरहेको छ, जसमा उनी आफ्नो प्रेमीसँग अलग्गै स्तरमा पुगेर रमाइलो गर्दैछिन्। जुन तल्लो स्तारको भिडियो अत्याधिक भाइरल बनिरहेको छ । निशा निकै प्रख्यात टिकटक स्टार हुन् । उनी नेपाली युवती हुन् । उनलाई टिकटकमा फलो गर्नेहरु पाैने ३ करोड भन्दा बढी छन् । टिकटकमा हेर्नुहोस् उनी केही वर्षमा यति धेरै चर्चामा आइन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** ह्या खैर म किन टिकटक भर्सेस यूट्यूब भ
एजेन्सी- हिजोआज समाजमा घट्ने हरेक प्रकारको वि-कृ तिलाई सोसल मिडिया युजरसले आफ्नो भिडियोको माʼध्यमबाट उजागर गर्ने गरि रहेका छन् । जुन अहिलेको निकै नै जल्दो बल्दो भिडियोको रुपमा छितोछरितो संसारभरी नै सबैको हातहातमा भएको मोबाईलको माध्यमद्धारा पुग्ने गरेको छ । विगत ८ महिनादेखि शारी-रिक र मा-नसिक शो’ष’ण गर्दै आईरहेका रहेछन् । जुन कुरा श्रीमतीले श्रीमानलाई सुनाउँदा श्रीमानले विश्वास नै नगरेका………भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्….. जस्मा हाम्रै आँखा अगाडी घटी रहेका तर हामीलाई विश्वास नै नलाग्ने घट-नाहरु समावेश गरिएका हुन्छन् । सोसल मिडिया युजरसले बनाएका यस प्रकारका भिडियोले सबैलाई एउटा सकारात्मक कुराको सन्देश दिईरहेको हुन्छ । साथै यस्ता भिडियोहरुबाट हामी पुर्व सचेत रहने मौका पाईरेका हुन्छौं । यस्तै एउटा घटना भारतको दिल्लीमा घटेको छ । जहाँ सानैदेखिसंगै खेलेर हुर्किएका साथीले आफ्नै श्रीमतीला
सदाबहार नेपालि नायिका हुन करिश्मा। नेपाली फिल्ममा करिश्मा मानन्धर निकै चर्चित अभिनेत्री पनि हुन् । उनको अनुहार पोस्टरमा राखे फिल्म सफल हुने विश्वास निर्माता तथा निर्देशकमा थियो । २०४२ सालमा बनेको फिल्म ‘सन्तान’ बाट अभिने त्रीको रुपमा डेब्यू गरेकी थिइन् । उनले हिन्दी फिल्म ‘दंगा फसाद’ मा समेत अभिनय गरेकि थिइन् ।पछिल्लाे पटक उनले अभिनय गरेकाे फिल्म ‘हिरोज्’ हाे र त्यसपछि भने उनी अध्ययनमा व्यस्त बनेकि छिन् । १४ वर्षको उमेरमा कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा ‘सन्तान’ फिल्ममा अभिनय गरेपछि उनले अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सकेकी थिइनन् । करिब ३ दशकपछि उनी आफ्नो पढ्ने इच्छालाई पूरा गरिरहेकी छन् । एसइई उत्तिर्ण भएर अहिले उनी कक्षा ११ मा भर्ना भएकी छन् ।करिअरको उत्कर्षमा रहँदा करिश्मालाई फिल्ममा खेलाउन निर्माता-निर्देशक झैँ ठूला कम्पनीबीच पनि ब्रान्डको प्रवद्र्धनका लागि विज्ञापनमा उनलाई लिन हानाथाप गर्थे
काठमाण्डौ । प्रेम कसैले रंगका आधारमा गर्ने गर्छन् भने कसैले उचाईका आधारमा । कतिपयले त सुन्दरतामा पनि ध्यान दिएर प्रेम गर्ने गर्छन् । परिपक्कहरुले प्रेम गर्दा सोंच विचार गरेर मात्रै प्रेम प्रस्ताव राख्दछन् । भने कतिपयले जातका आधारमा पनि प्रेम गर्ने कि नगर्ने भनेर तय गर्दछन् । आखिर प्रेम जस्ले जसरी गरेतापनि यस्को निष्कर्श भनेकै विबाह हो । र प्रेमको अन्त्य पनि विबाहमै गएर टुंगिने हो ।प्रेमदेखि विवाहसम्म र भविष्य पनि सोचेर प्रेम गर्ने युवतीहरु कमै हुन्छन् । र जस्ले गर्छन् ती आफैमा बौद्धिक हुन्छन् । उनीहरुलाई समझदार मानिन्छ तर, पहिला नजरमा नै प्रेममा पर्ने युवतीहरु कस्ता हुन्छन् होला ? उनीहरुको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? र उनीहरुको प्रेम कति समयसम्म टिक्छ त ? यो कुरा जान्नकोलागी एउट युवकलाई निकै नै गाह्रो कुरा हो । तरपनि जान्न सकिन्छ । पहिलो अक्षर ए बाट आउने युवतीहरुको स्वाभाव इमोशनल हुन्छ । यिनीह
एजेन्सी । विश्वमै सुन्दर अभिनेत्री एरियल विन्टर हलिउडमामात्र होइन विश्वभर चर्चामा छिन् । शारीरिक बनोटकै कै कारण उनी विश्वभर चर्चित बनेकी हुन् । सुन्दरताकी खानी तथा मिठो आवाजकी धनी एरियलले दिएका तस्विरले विश्वभर हंगामा मच्चाएको छ । २० बर्षीय अमेरिकी अभिनेत्री सुन्दरताले मात्र विश्वभर चर्चामा छैनन् । उनको आवाज पनि त्यतिकै मिठो छ । सुन्दर अभिनय कलाभएकी एरियलका हरेक फिल्महरु हिट हुने गरेका छन् । उनको अभिनय रहेका प्रायः चलचित्रले द’र्शकको मन जित्न सफल भएका छन् । चल’चित्रबाट सफलता हात पारेपछि उनी निकै व्यस्त नायिका बनेकी छिन् । तर पछिल्लो समय उनले आफूलाई मन पर्ने फिल्ममा मात्र अभिनय गर्न थालेकी छिन् ।
चर्चित नायिका झरना थापा एक जमनाकी नम्बर एक नै थिइन। उनले खेलेका धेरै जसो फिल्म हरु समग्र मा सफल नै मानिन्छ।अहिले आएर उन्ले आफ्नि छाेरी सुहानालाइ नेपालि चलचित्र छेत्रमा उतारेकि हुन साथै सफल नायिकाको रुपमा स्थापित गाराइ सकेकिछन। चलचित्र “ए मेरो हजुर ३” बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरिकी हुन सुहाना थापा। केहि समयअघि झरना थापाको सुपुत्रि भनेर परिचय पाएकि सुहाना अहिले भने नेपाली चलचित्रकालागि उदाउँदो नायिकाका रुपमा स्थापित भएकि छिन् । नायिका झरना थापाले आफ्नि छोरी सुहानालाई समाजिक संजाल फेसबुकमा गुडियारानी भन्दै शुभकामना स्टाटस राखेकि थिइन। नायिका झरनाले अमेरिकामा पढिरहेकी छोरी सुहानालाई उनले आफ्नै निर्देशनमा तयार भैरहेको चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’बाट डेब्यू गराएकि थिइन् । उक्त चलचित्रमा अहिलेका जल्दाबल्दा नायक अनमोल केसि को साथ थियो र नायिका सुहानाले दर्शकबाट धेरै राम्रो प्रशंसा प
काठमाडौं – अभिनेत्री आँचल शर्मा प्रेमी उदिप श्रेष्ठसँग विवाह बन्धनमा बाधिएको एक बर्ष हुन् लागेको छ। एक बर्ष अघि हिन्दू परम्परा अनुसार उनीहरुले बुढानिलकण्ठस्थित होटल पार्क भिलेजमा विवाह गरेका थिए। ‘हामी तीन जना हुंन समय लाग्छ’, श्वेता खड्का र विजयन्द्रसिंह रावतको रिसेप्सनमा आँचलले जिस्किंदै भनिन्, ‘पहिला पाँच छ वटा पार्टी खाउँ न । साडी सम्हाल्ने कि, ब्याग सम्हाल्ने कि बच्चा !’ आँचललाई उदिपको केयरिङ गर्ने बानी असाध्यै मन पर्छ। उनलाई उदिपलाई नभेट्दासम्म आफ्नो बुबा र दादाले मात्र केयर गर्ने गरेको सम्झना छ। तर, उदिपलाई भेटिसकेपछि भने उनलाई ‘केटा मान्छे यस्तो पनि हुन सक्छ ?’ भन्ने लागेको थियो। ‘उहाँको केयरिङ देखेर केटाहरू पनि यस्तो हुन्छन् र भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँको यही बानीको म कायल छु।’ उदिपलाई भने आँचल असल केटी लाग्छ। ‘खै म त उनको एउटा–दुइटा मात्र कुरा राम्रो कुरा भन्नै सक्दिनँ
गायिका नेहा कक्कडले सोसल मिडियामा एउटा रमाइलो भिडियो पोस्ट गरेकी छिन् । यसमा उनी श्रीमान् रोहनप्रित सिंहलाई धम्की दिइरहेको देखिएकी छिन् जसमा उनले श्रीमानलाई एक्सलाई फोन गरेको थाहा पाए आफूभन्दा खराब कोही नहुने बताएकी छिन् । यद्यपि, यो एक रमाइलो भिडियो हो जसमा नेहा कक्कड श्रीमान् रोहनप्रितसँग मजाक गरिरहेको देखिएकी छिन् । भिडियोमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि रोहनप्रित सिंह ‘एक्स–कलिङ’ गीतमा अभिनय गरिरहेका देखिएका छन् । त्यसपछि नेहा कक्कडले उनलाई धम्की दिँदै श्रीमानकी एक्सले अर्को व्यक्तिका लागि रोहनप्रितलाई धोका दिएको भन्दै एक्सलाई फोन नगर्न भनेकी छिन् । नेहाले क्याप्सनमा लेखेकी छिन्, ‘एक्स कलिङ? ठिक छ । गर तिमी फोन, त्यसपछि भन्नेछु… हाहाहा, रोहनप्रित सिंह, मलाई यो गीतसँग प्रेम छ ।’ यसमा रोहनप्रित सिंहले कमेन्ट गर्दै लेख्छन्, ‘ओ, कोही छैन, कोही छैन, कोही छैन, नरिसाउ । तपाईंलाई यो गीतसँग प